लोम्बार्डको ऋण के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki lombard ऋण
लोम्बारड ऋण के हो?
पारंपरिक बैंक ऋण, बांड, कारखाना, ओभरड्राफ्ट, आपूर्तिकर्ता वा ग्राहक ऋणको साथमा, त्यहाँ अझै पनि एक क्रेडिट छ lombard ऋण भनिएको छ।
यस लेखमा, हामी यसलाई सकेसम्म सजिलो बनाउन चाहानुको लागि तपाईं बुझ्न को लागी एक लोम्बारड ऋण हो र यो कस्तो फाइदा वा हानिकारक छ।
यो एक चल सम्पत्ति (द्वारा कहिलेकाहीं वास्तविक संपार्श्विक भनिन्छ) को लागी एक ऋण हो या सजिलै संग मार्केट अचल सम्पत्तिहरू (सजिलो वा बेचन गर्न सजिलो)।
अमूल्य सम्पत्तिहरू, उदाहरणका लागि, भूमि र अचल सम्पत्ति, चल सम्पत्तिहरू उदाहरणका लागि कम्पनी, शेयरहरू वा समानको सूची हो।
तपाईं शायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं त्यस्तो लम्बाको ऋणमा कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ।
एक ऋणीको रूपमा तपाईं यी सम्पत्तिहरूको मालिक (जस्तै सिक्योरिटीज) मालिक हुनेछ, तपाइँको बैंकले यो लेनदेन र यस मालिकको मालिक हुनेछ।
अंतर व्याख्या गर्न सजिलो छ, मालिकले कारण को अधिकार को बरकरार राख्छ र मालिक वास्तव मा यो आफ्नो हात मा छ।
शीर्षकमा एउटा सानो उदाहरण:
खरीदारी गर्दा, तपाइँ एक टि-शर्ट फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाई साँच्चै मन पराउनुहुन्छ र यसलाई खरीद गर्नुहुन्छ।
यसले तपाईंलाई मालिक र यसको मालिक बनाउँछ।
तर यदि तपाईं आफ्नो प्रेमिका वा प्रेमी प्रेमीबाट यो टी-शर्ट उधार गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अझै पनि मालिक हुनुहुन्छ, तर हालको मालिक तपाईंको साथी हो, किनकि उसले / तिनी वास्तवमा कपडामा राख्छन्।
यसबाहेक, यो प्राय: लोम्बारड ऋण हो कि मानको एक सानो प्रतिशत हेजको रूपमा कार्य गर्दछ।
यस प्रतिशतको साथ, मूल्यको उल्टै उल्टै खातामा लिइन्छ र यसैले राखिएको छ।
तपाईंको सम्पत्ति कसरी मूल्यवान छ भन्ने आधारमा, उचाईको मूल्य तपाईले उधाराउन सक्नुहुनेछ।
यस अवस्थामा प्रयोगयोग्य अर्थ भनेको कति छिटो वा बस बेच्न सकिन्छ।
स्टक बजारमा उच्च अस्थिरताको कारणले प्राय: सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दैन।
व्यक्तिका लागि एक लोम्बारड ऋण सामान्यतया सजिलो छ र कम नौकरशाहीको क्रेडिट को धेरै अन्य रूपहरू प्राप्त गर्न।
एक Pfandleihaus को सिद्धान्त यहाँ सादगी को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तिनीहरू ल्याउन, घडी भन्नुहोस्, पनरो पसलमा र निश्चित रकम पाउनुहोस्।
सरल र असंबद्ध र पछि तपाईं कम से कम यस बजरजर भुक्तानी गरेर यो घडी फिर्ता पाउन सक्नुहुनेछ।
उल्टो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि यदि तपाईं सहमत सहमतिको अवधिमा सहमति भएको रकम फिर्ता गर्न असफल भएमा, सम्पत्ति वा सम्पत्ति नीलामी गरिनेछ।
लोम्बारड क्रेडिट - प्रकार
प्रतिज्ञा को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, तपाईंको लोम्बारड ऋण को अतिरिक्त नाम छ:
उदाहरणका लागि, सिक्योरिटीज लोम्बार्डले लोम्बारड ऋण भनिन्छ, जसमा प्रतिभूतता एक आधारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
विनिमय बमबर्धनको बिलले सम्पत्तिको रूपमा समावेश गर्दछ, जस्तै नामले सुझाव दिन्छ, परिवर्तन *।
तेस्रो र अन्तिम Warenlombard हो, यो वस्तुको भण्डारणलाई बुझाउँछ।
* विनिमयको बिल: एक चेकको समान, एक विशेष स्थान र मिति स्वीकृत रकम को स्थानान्तरणको लागि सहमत भएको छ।
यो विषयलाई बुझ्न सजिलो बनाउन, तपाईं लेखको अन्त्यमा एक भिडियो फेला पार्नुहुनेछ, जसमा लोम्बारड ऋण एक पटक थप सरलीकृत र व्याख्या गरिएको छ। यदि तपाइँसँग थप प्रश्नहरू छन् भने, केवल हाम्रो सक्षम सेवा टोलीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, जसले तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ।
अघिल्लो लेखLohmann-Ruchti प्रभाव
अर्को लेखमास्टर विद्यार्थी ऋण